कोरोना : सिटी भ्यालु भनेको के हो, कति दिन आइसोलेसन बस्ने ?
हाम्रो खबर शनिबार, कात्तिक २९ २०७७
सामान्यतया सिटी भ्यालुको अंक ३७ पछि कोरोना नेगेटिभ भएको मान्ने गरिन्छ। सिटी भ्यालु जति कम भयो त्यति नै भाइरसको भार बढी, संक्रमणको लक्षण गम्भीर र बढी संक्रामक हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ ।
केही समय अगाडिसम्म कोरोनाको रिपोर्टमा पोजेटिभ हो वा नेगेटिभ भन्नेमात्र उल्लेख हुन्थ्यो। अहिले रिपोर्ट दिँदा त्यसमा कोरोनाको जीनको ‘सिटी भ्यालु’ समेत समावेश गर्न थालिएको छ।
त्यसैले अहिले धेरैको जिज्ञासा नै ‘सिटी भ्यालु’ के हो भन्नेमा छ । सिटी अथवा ‘साइकल थ्रेसहोल्ड’ को भ्यालु (अंक) चिकित्सकका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसबाट बिरामीमा भाइरसको भार, संक्रमणको गम्भीरता र संक्रमण फैलाउन सक्ने क्षमता अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सामान्यतया सिटी भ्यालुको अंक ३७ पछि कोरोना नेगेटिभ भएको मान्ने गरिन्छ।
सिटी भ्यालु जति कम भयो त्यति नै भाइरसको भार बढी, संक्रमणको लक्षण गम्भीर र बढी संक्रामक हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ । तर सिटी भ्यालुको अंक जति बढी भयो त्यति नै भाइरसको भार कम, लक्षण र संक्रामक कम हुने अनुमान गरिन्छ ।
प्रारम्भिक पिसिआर रिजल्टको सिटी भ्यालु, अनुमानित पिसिआर नेगेटिभ हुने समय र त्यसको आधारमा आइसोलेसनमा बस्ने समय अबधि:
१. प्रारम्भिक सिटी भ्यालु १५-१६ हुँदा : आइसोलेसन अबधि चार हप्ता
२. प्रारम्भिक सिटी भ्यालु २०-२१ हुँदा : आइसोलेसन अबधि तीन हप्ता
३. प्रारम्भिक सिटी भ्यालु २४-२५ हुँदा : आइसोलेसन अबधि दुई हप्ता
४. प्रारम्भिक सिटी भ्यालु ३०-३१ हुँदा : आइसोलेसन अबधि एक हप्ता
पिसीआरको रिपोर्टमा भाइरसको मात्रा जाँच गर्दा पिसिआरको एम्प्लिफिकेसनको त्यो बिन्दु हो जहाँदेखि भाइरसको जिन पत्ता लाग्दछ वा कर्भ उठेर 'एस' आकार लिन्छ । पिसिआरको रिपोर्टमा भाइरसको मात्रा सिटी भ्यालुले जनाउने चिकत्सकहरूले जनाएका छन् ।
सिटी भ्यालु थोरै हुँदा भाइरसको मात्रा धेरै हुने र सिटी भ्यालु धेरै हुँदा भाइरसको मात्रा थोरै बताइएको छ ।
सामान्यतया सिटी भ्यालु १२ देखि ४० सम्म हुन्छ। पिसिआरको रिपोर्ट पोजिटिभ हुनलाई सामान्यतया धेरै भाइरल लोड भएको बेला १२- १५ सम्म हुन्छ, किट अनुसार पनि फरक पर्दछ ।
सामान्य तया पहिलो १ देखि ४-५ सम्मको सुरुआति सिटी भ्यालु हुन्छ। त्यस पश्चातको ५ देखि १० सम्मको सिटी भ्यालुलाई उपकरण, जाँचमा प्रयोग गरिने किट्स, कित्स्मा प्रयोग गरिने नेगेटिभ कन्ट्रोल र पोजिटिभ कन्ट्रोलको औसतको आधारमा भाइरोलोजिष्ट/माइक्रोबायोलोजिष्टले पिसिआर उपकरणमा सेट गर्नु पर्दछ ।
पिसिआरको रिपोर्ट नेगेटिभ हुनलाई सिटी भ्यालुको कट अफ बिन्दु जाँच गरिने किट अनुसार ३६ देखि ४० सम्म हुन्छ । सामान्यतया सिटी भ्यालु ३०-३२ हुँदा भाइरसको मात्रा घटिसकेको हुन्छ ।
शरीरको प्रतिरक्षात्मक शक्तिले काम गर्दा एक हप्ता सामान्यतया पाँच युनिट सिटी भ्यालु घट्छ र यसरि सुरुमा जाँचको रिपोर्टमा सिटी भ्यालु २०-२१ भएको खण्डमा पहिलो हप्ता पछी २४-२५ हुन्छ, दोस्रो हप्तामा ३०-३१ र तेस्रो हप्तामा ३५-३६ हुन्छ र २१-२२ दिनमा पिसिआरको रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ ।
सामान्यतया केहि अपबादमा यो समय घट्बढ् हुनसक्छ । त्यसलाई उमेर, लिङ्ग, शरीरको प्रतिरक्षात्मक शक्ति, एन्टी भाइरल औषधिको प्रयोग, फोक्सोको स्थिति, अरु रोगहरू इत्यादिमा भर पर्दछ ।